(नेकपा)का लोकप्रिय नेता तथा पूर्व पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको जीवन
युवाको लागि केहि गर्ने सपना बुन्नुभएको शेर्पा आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ नभएको बताउनुहुन्छ
52325 पटक पढिएको
पृष्ठभूमि र जन्म
कृपासुर शेर्पा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पुर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाल शेर्पा संघको अध्यक्ष समेत भइसकेका शेर्पा पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण फाउण्डेसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशिल शेर्पा सरकारी सेवामा हुँदा बनाएको पहुँच र साधन स्रोतलाई भोजपुरको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा योगदान गर्नु भएको छ ।
स्व. सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको सपथ लिदै
शेर्पा भोजपुर जिल्लाको साम्पाङ मझुवा- ५ मा बुवा छेत्तर शेर्पा र फुरदिकी शेर्पाको छोराको रुपमा मध्यमबर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका शेर्पा राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ । उहाँको जीवनसंगी कमला शेर्पा हुनुहुन्छ । २०३६ सालको विधार्थी अन्दोलनवाट विधार्थी राजनीति सुरु गरेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय शेर्पा स्व. सुशील कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा पर्यटन मन्त्रीसम्म बन्नुभएको थियो । उहाँले शिक्षणमा ६ वर्ष र निजामती २६ वर्ष गरी ३२ वर्ष सरकारी सेवा गर्नु भएको छ ।
शेर्पाले भोजपुरको रामआदर्श रात्री बिद्यालयवाट एसएलसी पास गरी प्राइभेट रूपमा कानुनमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पढाइ पूरा गर्नुभएको हो । उहाँले नेपाल ल क्याम्पसवाट कानुनमा स्नातक तह उतीर्ण गरी जन प्रशासन क्याम्पसवाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको हो ।
उहाँले अहिलेसम्म कुनै पुस्तक निकाल्नुभएको छैन । प्रकाशकको रुपमा सुनखरी साहित्यिक पत्रिका, दी न्यू ऐरा, इलाम टाइम, एक्कादइसौ शताब्दी, जापानको चक्कर, नेपालमा जातीय अन्दोलन जस्ता लेखहरु प्रकाशित छन् ।
शेर्पालाई सामान्य नेपाली खाना नै मनपर्छ । उहाँ खानामा कहिले पनि यहि हुनुपर्छ भन्नुहुन्न, जे जस्तो भए पनि हुन्छ उहाँलाई ।
उहाँलाई साधारण पोसाक मनपर्छ । औपचारिक पोसाकको रुपमा दौरा सुरुवाल लगाउने शेर्पा अन्य समयमा भने सर्ट-प्यान्ट लगाउनुहुन्छ ।
उहाँ दैनिक बिहान सामान्य व्यायाम गर्नुहुन्छ । मौसम अनुकुल हुँदा कहिलेकाहिँ बिहान हिड्ने शेर्पा प्राय घरमै सामान्य खालका व्यायाम गर्नुहुन्छ ।
घुमफिर र फुर्सद
शेर्पालाई घुम्न धेरै मनपर्छ, समय मिलेको अवस्थामा घुम्न निश्किने बताउने उहाँ फुर्सदको समयमा किताब र पत्रपत्रिका पढ्ने, रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने गर्नुहुन्छ ।
उहाँलाई खेलकुदमा एकदम रुचि रहेको छ बिशेषगरी फुटबल र भलिवल मन पराउनुहुन्छ । युवा अवस्थामा भलिवल र फुटबल खेल्नुहुने शेर्पा हाल उमेरका कारण खेल चाहिँ खेल्नुहुन्न । तर राष्ट्रियस्तरका खेल हेर्ने र खेल आयोजना गर्न सहयोग गर्दै आउनुभएको उहाँले युवाले खेलमार्फत अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देख्नुभएको छ ।
शेर्पा सूचना र संचारको लागि मोबाइल अहिलेको आवश्यक साधन हो भन्नुहुन्छ । मोबाइल जनसम्पर्कको लागि अति उपयोगी भइसकेको बताउनुहुन्छ । चलाउन सजिलो लागेका कारण आइफोन बोक्ने गर्नुहुन्छ शेर्पा ।
उहाँ टिभिमा बिशेषगरी अन्तर्वार्ता, समाचार र प्रतियोगिताका कार्यक्रम हेर्ने गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेल पनि टेलिभिजनमा हेर्ने एकदम रुचि छ शेर्पाको ।
चलचित्रमा खासै रुचि नराख्ने शेर्पाले पछिल्लोपटक हल जानुभएको याद छैन उहाँलाई । अहिलेसम्म जम्मा तीनपटक मात्र हल पुगेको सम्झने शेर्पाले अन्तिम फिल्मको कुनै सम्झना नरहेको बताउनुहुन्छ । तर टेलिचलचित्रमा भने उहाँको निक्कै रुचि रहेको छ ।
तामसी भोजन नरुचाउने शेर्पा खानाभन्दा बढी सब्जी धेरै रुचाउनुहुन्छ । उमेरका कारण मासुका परिकार पनि कम मात्र खाने उहाँ खानपानकै कारण स्वस्थ स्वास्थ्य राख्न सफल हुनुभएको
संस्कृति जोगाउने नियम अनुसार प्रसादको रुपमा मात्रै उहाँले मध्यपान लिनुहुन्छ । शेर्पा अन्य समयमा तामसी भोजन लिनुहुन्न ।
उहाँ विशेषगरी लोकदोहोरी बढी सुन्ने गर्नुहुन्छ । मार्मिक र भाव भएका गीतहरु सुन्न रुचाउनुहुन्छ । शेर्पा भन्नुहुन्छ गीतले मन छुन सक्नुपर्दछ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि अत्माग्लानी हुने काम गरेको छैन ।”
सौन्दर्य प्रकृतिको प्रद्दत सम्पति हो र यो अति नै आकर्षणको केन्द्र हो शेर्पाको बुझाइमा ।
शेर्पा भन्नुहुन्छ, “प्रेम दुइ अलग अलग आत्माको मिलन हो ।” प्रेमले जीवनलाई अगाडि बढ्न सहयोग गर्दछ शेर्पाको बुझाइमा ।
जीवनको अन्तिम समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमै रहने र देश विकास गर्न सकेको योगदान गर्ने सपना रहेको बताउनुहुन्छ शेर्पा । युवाको लागि केहि गर्ने सपना बुन्नुभएको शेर्पा आफ्नो कुनै निजी स्वार्थ नभएको बताउनुहुन्छ ।
शेर्पाले भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, हल्याण्ड, बेल्जियम, हङकङ, लक्जम्वर्ग, आयरल्याण्ड, अल्जेरिया आदि देशको भ्रमण गरी सक्नु भएको छ ।
न्यून आय भएका र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई राहत दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
वीर अस्पतालमा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका २ जनाको मृत्यु
बुटवल कोरोना अस्पतालमा मृत्यु भएका थापाको कोरोना रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’
भुटानले २१ दिनसम्म पुरै देश लकडाउन गर्ने घोषणा
भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकमा खटिएका प्रहरी हवल्दारमाथि चक्कु प्रहार
बाटोमा अलपत्र परेकालाई सहयोग गर्न तरुण दलको परिपत्र